ကာကွယ်ရေးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှုးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး မင်းအောင်လှိုင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Best Web Awards » ကာကွယ်ရေးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှုးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး မင်းအောင်လှိုင်
ကာကွယ်ရေးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှုးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး မင်းအောင်လှိုင်
ဂျူလိုင်၉ရက်နေ့ USAID နဲ့ပူးပေါင်းကျင်းပတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲမှာ ရန်ကုန်ဝန်ချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းက အရပ်ဖက် စစ်ဖက် အုပ်ချုပ်ရေးဆိုတာ ဒီမိုကရေစီစနစ်တွင် မရှိကြောင်း၊ စစ်တပ်ကာချုပ်သည် ရုံးလုပ်ငန်းဗျူရိုကရေစီအရ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်အဆင့်သာ ဖြစ်ကြောင်း ပြောလို့ အရေးယူပေးရန် စစ်တပ်မှတိုင်ကြားကြောင်း သတင်းတက်လာတယ်။ စစ်တပ်လော်ဘီတွေဆိုတာ အဆီဗူးခါ နာလိုက်တာ ဘယ်ပြောကောင်းမလဲ။ ဒင်းတို့ ဘုရားလောက်နီးနီး သတ်မှတ်ချီးပထားသူကို မင့်ဟာက ကျေင်းထိုင်ဘုန်းကြီး သာသာပါကွာ ပြောလိုက်တော့ ထုံးစံအတိုင်း ရိုးရာမပျက် ဆဲဆိုတုံ့ပြန် ရန်လုပ်ကြတာပေါ့။ နိုင်ငံရေးအရ ကြည့်လျင် ထူးခြားတယ် ဆိုရမယ်၊ အာဏာရတာ တနှစ်ကျော်လာပြီး ဘာမှ မယ်မယ်ရရ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု မလုပ်နိုင်သေးတဲ့ စစ်တပ်မျက်နှာ အငြိုအငြင်မခံရဲတဲ့ ဒီချုပ်အစိုးရရဲ့ နိုင်ငံရေးခြေလှမ်းအသစ် ဖြစ်ပေမလား။ ရဲနဲ့တရားရုံတွေကို စောင့်ကြည့်ကြပ်မတ် ကွပ်ကဲသွားမည်၊ ခေတ်နဲ့မညီ မမျှတတဲ့ ဥပဒေတွေ ပြောင်းလဲပြင်ဆင်သွားမည်လဲ ပြောထားတော့ တိုက်ဆိုင်တာတော့ မဖြစ်နိုင်။ မဘသကိုလည်း အပြီးဖျက်သိမ်းဖို့ ဇူလိုင်၁၅ရက်နေ့ ရာဇသံပေးထားတယ်။ အုပ်ချုပ်ရေးယန်းဒရားကို စတင်ကိုင်တွယ်ပြီလို့ အကောင်းဖက်က ယူဆပါ၏။
ယေဘူယျ သတင်းလောက်သာ သိရလို့ ဘာရယ်လို့ ကောက်ချက်ချရန် စောလွန်းနေတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကွီးဖြိုးပြောတဲ့ ကာချုပ်သည် ညွှန်ချုပ်အဆင့်လို့ အလွတ်တန်းပြောဆိုချက်ကို ခွဲခြမ်းကြည့်မယ်။
အရပ်သားအုပ်ချုပ်မှု ဖွဲ့စည်းပုံအရ စစ်ဦးစီးချုပ် (ကာချုပ်) အထက်မှာ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးရှိတယ်၊ ဒုကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးလဲ ရှိနိုင်တယ်။ ကာချုပ်သည် စစ်ရေးစစ်ရာ၊ တပ်အုပ်ချုပ်မှုကို တာဝန်ခံပြီး ကာဝန်သည် တပ်ကို စီမံခန့်ခွဲ၊ လွှတ်တော်ကို တာဝန်ခံဖြေကြား၊ အစိုးရအဖွဲ့ကို အစီရင်ခံရတယ်။ ဝန်ကြီး၊ ဒုဝန်ကြီးအောက် တဆင့်နိမ့်တာ ဘယ်သူလဲ…. ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ပါ။ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်ကို ညွှန်ချုပ်ထက် စီနီယာလို့ သတ်မှတ်လျင် ကာချုပ်သည် အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်အဆင့်ပေါ့။ စစ်တပ်လိုပဲ အင်အားသိန်းချီတဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲချုပ်ကို မြင်ကြည့်ပါ။ သူ့ရဲ့အဆင့်သည် ဖွဲ့စည်းပုံမှာ ညွှန်ချုပ်အဆင့်။ ပြီးခဲ့တဲ့ သမတ ဦးသိန်းစိန်လက်ထက်တုံးက ရဲချုပ်ကို ပြည်ထဲရေး ဒုဝန်ကြီးအဆင့်ပေးဖူးတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံပြန်တမ်းမှာ ထည့်သွင်းဖေါ်ပြခံရတဲ့ စစ်တပ်အရာရှိအဆင့်သည် ကြယ်သုံးပွင့် ဗိုလ်ကြီးမှစတယ်။ အရပ်ဖက်ဝန်ထမ်း ဦးစီးအရာရှိနဲ့ တန်းတူတယ်။ ဗိုလ်ကြီး = ဦးစီးမှုး၊ ဗိုလ်မှုး = လက်ညွှန်၊ ဒုဗိုလ်မှုးကြီး = ဒုညွှန်၊ ဗိုလ်မှုးကြီး = ညွှန်မှုး၊ ဗိုလ်မှုးချုပ် = ဒုညွှန်ချုပ်၊ ဗိုလ်ချုပ် = ညွှန်ချုပ်၊ ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီး = မြဲဝန်၊ တိုက်ရိုက် တန်းညှိရင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသည် ဒုဝန်ကြီးပဲ။ ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီးရာထူးဆိုတာ အလကားသောက်ပို ဆန်မရှိဘဲ စောင်စားကြီးတာ။ ရှုပ်ထွေးစေတာက နိုင်ငံကြီးထဲ နိုင်ငံလေးဆောက်၊ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရတဲ့ အရပ်သားအစိုးရနဲ့ စင်ပြိုင် စစ်တပ်နေရာယူထားတာ။ ရပ်ကွက်ထဲ လူမိုက်က အုပ်ချုပ်ရေးမှုးနဲ့ ပုခုံးခြင်းယှဉ် အသိမှတ်ပြု ခံချင်တယ်။ စစ်အစိုးရခေတ်အဆက်ဆက် ငါတို့တိုင်းပြည်အတွက် အသက်ပေးတိုက်တာ ဟစ်ကြွေးပြီး ဗိုလ်ကြီးနဲ့ လက်ညွှန် ဒုညွှန်၊ ဗိုလ်မှုးနဲ့ ဒုညွှန် ညွှန်မှုး၊ ဒုမှူးကြီး မှုးကြီးနဲ့ ဒုချုပ် ညွှန်ချုပ် တက်လုပ်ကြတော့ အစဉ်အလာမှာ ညွှန်ချုပ်သည် ဗမက အဆင့်လောက်သာ ဖြစ်နေတယ်။ ၂၀၀၈ ခြေဥအရ စစ်တပ် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးသည် တပ်ချုပ်နဲ့ဒုချုပ်အောက် ရောက်နေတာ ထုံးစံမညီ။ ကာဝန်သည် တပ်ချုပ် အထက်မှာ ရှိရမည်။ တာဝန်ရှိမှုခြင်း တူချင်တောင် လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာ ပြယုဂ် တူချင်လို့မရ။ နိုင်ငံရေးသည် တိုင်းပြည်အရေးရာ အားလုံး၏ အထက်တွင် ရှိသည်။
တဖက်က တွေးပြန်ရင် အလုပ်သဘော သဘာဝခြင်း မတူတာထည့် စဉ်းစားရမယ်။ အနီးစပ်ဆုံးမှာ ဗဟိုဘဏ်ရှိတယ်။ ယခင်ဖွဲ့စည်းပုံမှာ ဗဟိုဘဏ် ဥကထသည် ညွှန်ချုပ်အဆင့်၊ (စစ်တပ် ဘယ်လိုမှ ဝင်မလုပ်နိုင်တဲ့ ပညာရှင် အရပ်သားနေရာမို့ တမင်နှိမ်ထားတာထင်ရဲ့)။ အခုတော့ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ကနေ ခွဲထွက်ပြီး သီးခြားလွတ်လပ်သော ဖွဲ့စည်းပုံ ဖြစ်သွားပြီ။ အစိုးရကက်ဘိနက် ဝန်ကြီးအဖွဲ့ဝင်လားဆိုတော့လဲ မဟုတ်ဘူး။ ရည်ရွယ်ချက်မှာ အစိုးရရဲ့ ဘဏ္ဍာရေးမူဝါဒနဲ့ ကိုက်ညီသော ငွေကြေးလည်ပတ်စီးဆင်းမှု ကိုင်တွယ်အုပ်ချုပ်ရမယ်ထင်တယ်။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့ နိုင်ငံတွေမှာတော့ ဗဟိုဘဏ် ပါဝါသိပ်ကြီးတယ်၊ ကိုယ်ပိုင် ငွေကြေးမူဝါဒ ချမှတ်ကျင့်သုံးတယ်။ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံမှာတော့ အစိုးရ အရိပ်အာဝါသ လွတ်မြောက်ဖို့ မဖြစ်နုိင်ဘူး။ စစ်တပ်ကို ဗဟိုဘဏ်လို ရှုမြင်မယ်ဆိုလျင်တောင် စစ်တပ်အကြီးအကဲသည် အစိုးရမှ ခန့်အပ် လွှန်တော်မှ အတည်ပြုသော ဝန်ထမ်းအကြီးအကဲထက် မပိုရပါ။ လွန်ရောကျွန်ရော ဝန်ကြီးအဆင့်ပေါ့။ ဒါကို ကိုယ်နေရာကိုယ်မသိ အမဲရိုး ဟင်းအိုးမှ အားမနာ တရားတဘောင်စွဲဦးမတဲ့။
ခေတ်မှီတပ်မတော်တွေမှာ တပ်ချုပ်ဆိုတာထက် ပူးတွဲစစ်ဦးစီးသဘာပတိအဖွဲ့ထားတယ်။ ကြည်း၊ ရေ၊ လေ ဦးစီးချုပ်များ တလှည့်စီ ဥကထလုပ် သမတကို တာဝန်ခံတယ်။ သမတမှာ ခန့်အပ်၊ ရွှေ့ပြောင်း၊ ထုတ်ပယ်ခွင့် အာဏာရှိတယ်။ လတ်တလော ဖြစ်ရပ်မှာ တူရကီနိုင်ငံ ဥပမာရှိတယ်။ အစဉ်အလာ ပါဝါသိပ်ကြီးတဲ့ တူရကီစစ်တပ်ကို ရွေးကောက်ခံသမတက အမိန့်ပေးအုပ်ချုပ်တာ၊ ထိပ်ပိုင်းစစ်အရာရှိတွေ ရွေးချယ်ခန့်အပ်တာ။ ပြောချင်တာ ညွှန်ချုပ်မလုပ်ချင်လို့ ဖွဲ့စည်းပုံ သီးခြားရှိတောင် စစ်တပ်သည် အရပ်သားအစိုးရအဖွဲ့ အကြီးအကဲ လက်အောက် ရှိတယ်။
စပ်ဆက်သတင်းအနေနဲ့ ဂျာနယ်သတင်းတခုမှာ ကာချုပ်နဲ့ဒုချုပ် ပင်စင်သက်တမ်း တိုးတဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ကွပ်ညှိ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြထွန်းဦး (အဲတုံးက စရဖချုပ် ဒုဗခက၊ ဦးသိန်းစိန်လက်ထက်တုံးက သတင်းဖြစ်မယ်။ ဒီချုပ်အစိုးရသက်တမ်းနဲ့အညီ သူတို့ပင်စင်အသက်ကို ၅နှစ်တိုးလိုက်တာ၊ အမှန်က တပ်ချုပ်သည် ၆၀ကျော်ပြီ ပင်စင်သွားရမယ်) က တပ်နဲ့ရဲသည် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း မဟုတ်ကြောင်း ပြောတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲ အာဏာရလာတဲ့ ဒီချုပ်အစိုးရ သဘောထား မသိရပါ။ သက်တမ်းတိုးတာ ညှိနှိုင်းထားတယ် ထင်ရပေမဲ့ နိုင်ငံဝန်ထမ်း ဟုတ်မဟုတ် အပေါ် အစိုးရသဘောထား ပွင့်လင်းမှုမရှိ။ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား အဓိပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်လို နှာစေးနှုတ်ပိတ်နေတယ်၊ ဒီမိုကရေစီနောင်ရေးအတွက် သိပ်အန်ဒရာယ်ကြီးမားလှတယ်။ အခန့်မသင့်လျင် ဒီချုပ်အစိုးရ သမိုင်းတရားခံ အမှုတွဲသွားမည်။
နိုင်ငံဘတ်ဂျက်မှ လခ၊ ခံစားခွင့် စတာတွေ ယူပြီး နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း မဟုတ်ဆိုတော့ ဘာကောင်တွေလဲ မသိ။ ခုရှုပ်မှ နောင်ရှင်း အမှိုက်ကစ ပြသာဒ် မီးမလောင်ခင် ဒီချုပ်အစိုးရ ရှင်းသင့်သည်။ စစ်တပ်မှ အရပ်သားအစိုးရကို ကြည့်ကောင်းကောင်း ကြည့်နေတာမဟုတ်။ြံခံထဲကကြက် ဘယ်အချိန် ရိုက်သတ်စားစား ရတယ် လွတ်ထားတာ။ တောင်းထဲ ပြွတ်သိပ်ထည့်ထားရာကနေ ဝဝဖြိုးဖြိုး အသားတိုး ချက်စားဖို့ ခြံထဲပို့လိုက်တယ်။ သူလဲ သူ့ဗျူဟာ ကိုယ်လည်းကိုယ့် ပရိယာယ်မို့ ရွေးကောက်ပွဲ ကြွေးကြော်သံ “ပြောင်းလဲချိန်တန်ပြီ” ကတိအတိုင်း ခြံစည်းရိုး တံတိုင်း မဖျက်နိုင်တောင် တံတိုင်းချဲ့ဖို့ အချိန်တန်နေပါပြီ။
ကွီးဖြိုး ကွီးဖြိုး ဒုံး ဒုံး…….
အတည်ပို့စ်လေး သေချာရေးပေးတာ ကျေးကျေးပါ အူးကြောင် .. ကွန်မန့်တွေပဲ စောင့်ဖတ်ပါ့မယ်..
ဒီလို အနှစ်တွေ မဖတ်ရတာ အတော်ကြာပြီ။ ဆက်လက်စောင့်မျှော်နေမယ်…
အနာ နဲ့ ဆိုတော့လည်း စပ်ကြပေမပေါ့။
ဆိုတော့.. ကော်မန့်ဘောက်စ်က ဘယ်လိုတွေဖစ်ပြီး.. Tools တွေမမြင်ရတော့ဘူးလည်းမသိ..။
ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံမပြောနဲ့.. ဘယ်နိုင်ငံမှာမှ.. တပ်ချုပ်အဆင့်မပြောနဲ့.. ဗိုလ်ချုပ်လောက်ရာထူးဆိုရင်တောင်.. ညွှန်ချုပ်ရာထူးအဆင့်လို့ သွားတန်းညှိပြောလို့မရ..
မတော်ထပစ်လိုက်… ပရုပ်ဆီလူးပြီး.. ကုလို့လဲရတာမဟုတ်..။
၁- ကျုပ်က ဗဟုသုတ နဲ တဲ့ထဲ ပါပါတယ်
၂- အတွေးအမြင်လဲ သိပ်မကျယ်ပြန့်ပါဘူး..
တပ်ချုပ် နဲ့ ညွှန်ချုပ် ကိစ္စ ကျုပ်အမြင်ပြောရရင်-
စစ်တပ် ဆိုတာ အစိုးရရဲ့ ဌာနခွဲ တစ်ခုတော့ မဟုတ်ပါဘူး
စစ်တပ်ဆိုတာ တိုင်းပြည်ရဲ့ နာမည်မခံတဲ့ ဒေါက်တိုင်တစ်ခုသာဖြစ်တယ်
ဒါကြောင့် အရပ်သားအစိုးရတွေထဲမှာ ဖွဲ့စည်းပုံအရ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး သို့မဟုတ် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးနေရာအောက်ထည့်ဖွဲ့ရပေမယ့်
လက်တွေ့မှာတော့ စစ်တပ်တွေက ၀န်ထမ်းဖွဲ့စည်းပုံအရ သီးခြားရပ်တည်သလိုပဲ ဖြစ်ကြတယ်လို့ မြင်ပါတယ်။
ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးရှိတဲ့နိုင်ငံအချို့မှာ (တကမ္ဘာလုံးအကြောင်းမသိလို့ အချို့လို့ပဲပြောတာ)
ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဟာ အခြားဝန်ကြီးတွေလို ကိုယ့်ဌာနရဲ့ အကြီးအကဲမဟုတ်ပါဘူး
အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရှိ စစ်တပ်ရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်မျှသာဖြစ်ပါတယ်..
စစ်တပ်ရဲ့ တကယ့်အကြီးအကဲကတော့ ကာကွယ်ရေးဦးစီးးချုပ်သာဖြစ်ပါတယ်..။
(စာရွက်ပေါ်မှာတောင်) သူ့ကိုခန့်တဲ့သူသာ သူ့ထက်ကြီးပါတယ်
ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကို သမ္မတက တိုက်ရိုက်ခန့်တဲ့ နိုင်ငံတွေအတွက်
ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဟာ အခြားသမ္မတတိုက်ရိုက်ခန့်ရာထူးတွေထက် နိမ့်တယ်မဆိုနိုင်ပါဘူး
ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဟာ သမ္မတတိုက်ရိုက်ခန့်ဝန်ကြီးများနဲ့ လယ်ပယ်တူဖြစ်ပါတယ်
ကျုပ်တို့ဆီမတော့ လက်ရှိ အတူယှဉ်တွဲအုပ်ချုပ်ဆဲကာလမို့ ကာချုပ်ဟာ သမ္မတနဲ့ လယ်ပယ်တူဖြစ်ပါတယ်..
(အဲလိုလေးဖြစ်ဖို့တောင် အရမ်းကို ကြိုးစားခဲ့ကြရပါတယ်..)
အနာပေါ် တုတ် ချမိတဲ့ကိစ္စမို့ အော်ကြီးဟစ်ကျယ်တော့ ဖြစ်အုန်းမယ်
သူလည်း သူ့အထွာနဲ့သူ အာဏာ အတင်း လုပ်ယူထားဆဲမို့ ငြိမ်ခံနေမှာတော့မဟုတ်။
ဒီဘက်ကလည်း ကျောင်းမှန်း ကန်မှန်း သိအောင် ထ ပြောပြီးနောက်
ဘာ ထပ် ပြောမယ်ဆိုတာ ရင်ခုန် စိတ်လှုပ်ရှားစွာ စောင့်ကြည့်လျက်. . .
၁။ ပြည်နယ်နဲ့ တုိုင်းဒေသကြီး အစုိုးရအဖွဲ့ ၀န်ကြီးချူပ်က ပြည်ထောင်စု အစုိုးရအဖွဲ့ ၀န်ကြီးနဲ့ အဆင့်တူတယ်လို့ သိထားတယ်။ ဒါဆုို ပြည်နယ်နဲ့ တုိုင်းဒေသကြီး အစုိုးရ အဖွဲ့ ၀န်ကြီးက ပြည်ထောင်စု အစုိုးရအဖွဲ့ ဒုတိယ ၀န်ကြီးနဲ့ အဆင့်တူလို့ ယူဆစရာ ရှိတယ်။
၂။ ပြည်နယ်နဲ့ တုိုင်း ဒေသကြီး အစုိုးရတွေမှာ ကာကွယ်ရေးနဲ့ လုံခြုံရေး ၀န်ကြီးဋ္ဌာနကို တပ်က အရာရှိ တစ်ယောက် တာဝန်ယူတယ်။ သူ့ရာထူးက ဗိုလ်မှူးကြီး များတယ်။ အထက်က အတုိုင်း စဉ်းစားရင် ပြည်နယ်နဲ့ တုိုင်းဒေသကြီး အစုိုးရကာလုံ ၀န်ကြီးဟာ ပြည်ထောင်စု ဒုတိယ၀န်ကြီးနဲ့ အဆင့်တူလို့ ယူဆစရာ ရှိတယ်။ တကယ်က မဟုတ်ဘူး။
၃။ ပြည်နယ်နဲ့ တုိုင်းဒေသကြီး ၁၄ခု ရှိသလိုဘဲ စစ်တုိုင်းကြီးတွေရှိတယ်။ အဲဒီ စစ်တုိုင်းကြီးတွေရဲ့ တုိုင်းမှူး (Regional Comander) တွေက ဗိုလ်မှူးချူပ် (ဗိုလ်ချူပ်) တွေ ဖြစ်တယ်။ အဲဒီတော့ အရပ်ဖက်နဲ့ စစ်ဖက် လှမ်း တန်းထုိုးရင် စစ်တုိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချူပ် (ဗိုလ်ချူပ်) ဟာ အရပ်ဖက် ပြည်နယ်နဲ့ တုိုင်း ဒေသကြီး အစုိုးရ ၀န်ကြီးချူပ်နဲ့ အဆင့်တူလို့ ယူဆစရာ ရှိတယ်။ တကယ်က အဲလို မဟုတ်ဘူး။ အဲဒီအတွက် စစ်ဖက် ရာထူးနဲ့ အရပ်ဖက် ရာထူးကို တုိုက်ရုိုက် တန်း ထုိုးလို့ မရဘူး။
၄။ စစ်ဖက်မှာ စစ်တုိုင်းမှုးတွေ အထက်မှာ စစ်ဆင်ရေး အထူးအဖွဲ့မှူး (ဒုတိယ ဗိုလ်ချူပ်ကြီး) တွေရှိတယ်။ သူတို့ အထက်ကမှ စစ်ဦးစီး အရာရှိချူပ် (ကြည်း/ရေ/လေ) Chief of Staff(Army/Navy/Air Force) တွေ ရှိတယ်။ (ကြည်း) က ဗိုလ်ချူပ် (ဒုတိယ ဗိုလ်ချူပ်ကြီး)၊ ရေ နဲ့ လေ က ဗိုလ်ချူပ်တွေ။ သူတုို့အထက်ကမှ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချူပ် (ကြည်း/ရေ/လေ) Commander in Chief (Army/Navy/ Airfoce တွေ ရှိတယ်။ ဗိုလ်ချူပ်ကြီးတွေ ဖြစ်တယ်။ သူတုို့ရဲ့ အထက်မှာ ဦးစီးချူပ် (ညှိနှိုင်းရေးနှင့် ကွပ်ကဲရေး) Joint Chief of Staff ရှိတယ်။ ဗိုလ်ချူပ်ကြီး ဖြစ်တယ်။ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချူပ် (ကြည်း) ဒုတိယ ဗိုလ်ချူပ်မှူးကြီး ရာထူးနဲ့ ဒုတိယ ကာကွယ်ရေး ၀န်ကြီး တာဝန်ယူရင် ညှိကွပ်ရဲ့ အထက်က ဖြစ်သွားမယ်။ သူ့အထက်မှ ကာကွယ်ရေး ၀န်ကြီး (ဗိုလ်ချူပ်ကြီး) ရှိတယ်။
၅။ အရပ်ဖက်မှာ ပြည်နယ်နဲ့ တုိုင်းဒေသကြီး အစုိုးရအဖွဲ့ ၀န်ကြီး = ပြည်ထောင်စု အစုိုးရအဖွဲ့ ဒုတိယ ၀န်ကြီး နဲ့ ယူရင် နောက်တဆင့်ဟာ တုိုင်းဒေသကြီး အစုိုးရအဖွဲ့ ၀န်ကြီးချူပ် = ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီး ဖြစ်ပေမဲ့ စစ်ဖက်မှာ ပြည်နယ်နဲ့ တုိုင်းဒေသကြီး အစုိုးရအဖွဲ့ ကာလုံ ၀န်ကြီးနဲ့ ပြည်ထောင်စု အစုိုးရအဖွဲ့ ကာကွယ်ရေး ၀န်ကြီးကြားမှာ တုိုင်းမှူး၊ စစ်ဆင်ရေး အဖွဲ့မှူး၊ စစ်ဦးစီး အရာရှိချူပ်၊ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချူပ်၊ ညှိကွပ်၊ ဒုတိယ ကာကွယ်ရေး ၀န်ကြီး အဆင့် ၆ဆင့် ရှိနေတယ်။
၆။ ကာကွယ်ရေး ၀န်ကြီးရဲ့ အထက်မှာ ဗိုလ်ချူပ်မှူးကြီး ရာထူးနဲ့ Commander in Chief (ကြည်း/ရေ/လေ မပါ) ရှိတယ်။ အခု စစ်ဖက်မှာ အမြင့်ဆုံး ဖြစ်တယ်။ CinC ကုို အလွယ် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချူပ် (ကာချူပ်) လုို့ ပြန်နေတယ်။ တကယ်က နုိုင်ငံတော် ကာကွယ်ရေး အကြီးအကဲ (Comander in Chief in Defence Services) ဖြစ်တယ် ။ အရပ်ဖက်မှာ ထိပ်ဆုံးက သမတ ဖြစ်တယ်။
၇။ အခု ကျနော်တုို့ဆီမှာ နုိုင်ငံတော် ကာကွယ်ရေး အကြီးအကဲက သမတ မဟုတ်ဘဲ တပ်က ဖြစ်နေသေးတယ်။ အမေရိကားမှာ သမတက CinC ဖြစ်တယ်။ တရုပ်မှာ စစ်ကော်မရှင် ဥက်ကဋ္ဌ နေရာကုို တပ်က အကြီးဆုံးက မယူဘူး။ ကွန်မြူနစ်ပါတီက အကြီးဆုံးက ယူတယ်လို့ မှတ်သားမိတယ်။
၈။ တချိန်မှာ သမတက CinC ဖြစ်ရင် တပ်က အကြီးဆုံးလူက သမတ ခန့်ရင် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး၊ ranker ဆုိုရင် Joint Chief of Staff ဖြစ်လိမ့်မယ်။
၉။ ပြောင်းပြန်ပြန်သွားရင် အရပ်ဖက် ပြည်ထောင်စု အစုိုးရအဖွဲ့ ၀န်ကြီးအောက်က ပြည်ထောင်စု အစုိုးရ အဖွဲ့ ဒုတိယ ၀န်ကြီး၊ သူ့အောက်ကမှ အမြဲတမ်း အတွင်းဝန်၊ သူ့အောက်ကမှ ညွန်ချူပ်ဖြစ်တယ်။ ကာကွယ်ရေး ၀န်ကြီးအောက်က ဒုတိယ ကာကွယ်ရေး ၀န်ကြီး၊ ညှိကွပ်၊ သူ့အောက်ကမှ စစ်ဆင်ရေး အထူးအဖွဲ့မှူး၊ သူ့အောက်ကမှ တုိုင်းမှူးနဲ့ ယှဉ်ကြည့်ဖို့ ဖြစ်တယ်။
၁၀။ တပ် အင်္ဂါစဉ်နဲ့ အရပ် အင်္ဂါစဉ် ယှဉ်ရင် comparsion of orange & apple ဖြစ်မယ်။ ဒါကြောင့် ပြည်ထောင်စု အစိုးရက ပြည်ထောင်စု အင်္ဂါစဉ်ကို ထုတ်ပြန်ပေးတာလို့ မြင်မိတယ်။
(မှားတာ မှန်တာ၊ ထောက်ခံတာ မထောက်ခံတာ မပါ၊ ဖြစ်နေတာကုို မြင်တဲ့အတုိုင်း ရေးတယ်၊ ကျနော် မြင်တာ ဖြစ်လို့ မှားနုိုင်တယ်၊ မငြင်းလိုဘူး၊ အမြင်မတူရင် ကုိုယ် မြင်တဲ့အတုိုင်း အစွန်းမထွက်ဘဲ comment ရေးလို့ ရတယ်၊ အစွန်းထွက်မယ် ဆုိုရင် မရေးပါနဲ့)